golis You are here: Home / Somali News / Puntland News / Boqortooyada Sucuudiga ayaa marakab xoolo ah kusoo ceshay Magaalada Bosaaso. Boqortooyada Sucuudiga ayaa marakab xoolo ah kusoo ceshay Magaalada Bosaaso. | allsaaxo online
golis You are here: Home / Somali News / Puntland News / Boqortooyada Sucuudiga ayaa marakab xoolo ah kusoo ceshay Magaalada Bosaaso. Boqortooyada Sucuudiga ayaa marakab xoolo ah kusoo ceshay Magaalada Bosaaso.
Boqortooyada Sucuudiga ayaa soo celisay xoolo ka dhoofay Magaalada Bosaaso ee gobolka Bari waxaa xoolahaas Laga raray dekeda Bosaso Ganacsato kasoo jeeda Degaanada Puntland ayaa lahaa xoolahaas .
Wixii kasoo kordhana inshaa alaah waan idin la socodsiinaynaa